केही कारणले पहिलो-समय प्रयोगकर्ताहरूको बहुमत डर छ र आफ्नो मिसिन अवास्तविक मेशिन, र धेरै व्यर्थमा मा स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ छैन। आखिर, यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र यो सिस्टम मा लाभ को धेरै, छैन पनि धेरै लोड दिन्छ। विशेष गरी एक समय मा आधुनिक कम्प्युटर यसलाई सुरक्षित धेरै भर्चुअल मिसिन चलाउन सक्ने यस्तो शक्ति छ जब।
तपाईँको मेसिन मा तपाईं कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम तपाईंलाई रुचि, जो कुनै पनि तरिका मुख्य सिस्टम को सञ्चालन असर गर्न सक्दैन काम स्थापना गर्न सक्छन् भर्चुअल पीसी छ। यो तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं कुनै पनि समयमा हटाउन र प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। एक नम्बर भर्चुअल मिसिन मात्र तपाईँको हार्ड ड्राइभमा ठाउँ खाली गरेर सीमित छ।
किन आफैलाई अवास्तविक मेशिन सेट गर्न प्रयास समय खर्च गर्न पर्छ औसत प्रयोगकर्ता? पहिले, यो बस देखा छ जो एक परीक्षण संस्करण, छ, विशेष गरी यदि र त्रुटिहरू समावेश हुन सक्छ, विभिन्न आवेदन परीक्षण को लागि उपयोगी छ। दोस्रो, भर्चुअल मिसिन सम्भव उनको अन्तिम संक्रमण गर्नुअघि, सञ्चालन प्रणाली को नयाँ संस्करण मूल्याङ्कन बनाउँछ। र तेस्रो, यो ओएस नै होस्ट सिस्टम मा चलान डिजाइन छैन भनेर आवेदन काम गर्न राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि एक वैकल्पिक ओएस अन्वेषण गर्न सक्छ। जो थाह, सायद यो थप स्थिर र तपाईं को लागि उपयुक्त हुनेछ।
भर्चुअल कम्प्युटर विधानसभा मिनेट को एक कुरा र केही क्लिक टाढा संग गरिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अग्रिम डिस्क वा चयन ओएस सेट गर्न तरिकामा सुरक्षित हुन।
स्थानीय मिसिन प्रयोगकर्ता मा, तर पनि नेटवर्क सर्भर मा मात्र होइन यस्तो कार्यक्रम काम गर्न सक्छन्। इन्टरनेटमा भर्चुअल पीसी - यो विकास को एक प्राकृतिक परिणाम हो जानकारी ठाउँ। तिनीहरूले सामान्यतया वेब-स्टुडियो र अनुभवी भन्ने सामान्य होस्टिंग प्रदान संभावनाहरु को पर्याप्त छैन प्रोग्रामर प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यसैले, तपाईं एक विशेष अवास्तविक मेशिन प्राप्त गर्ने निर्णय ठान्नु। म छनौट भनेर लागि एउटा अनुप्रयोग के हो? हामीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम पाँच छोटकरीमा विचार गरौं:
VMware कार्य केन्द्र;
माइक्रोसफ्ट देखि भर्चुअल पीसी;
VMware कार्य केन्द्र - बारे 6000 rubles - धनी कार्यक्षमता संग भर्चुअल कम्प्युटर घर प्रयोगकर्ताको लागि भन्दा कार्यालय कर्मचारीहरूको लागि थप डिजाइन, र यसैले लागत एकदम सभ्य छ। Vmware खेलाडी - तथापि, तपाईं घर लागि निःशुल्क संस्करण चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो संग, तपाईं अवास्तविक मेशिन सिर्जना गर्न सक्छ, तर यो गठन चलाउन तयार हुन सक्छ।
VirtualBox - उत्कृष्ट स्थानीयकरण संग निःशुल्क क्रस-मंच आवेदन। यो मिसिन fineness सेटिङहरू र गति अलिकति कमसल VWmare कार्य केन्द्र, तर यो फरक एक ठूलो संख्या अनुकरण गर्न सक्षम छ हार्डवेयर। र यो बरु केही Nameless घटक भन्दा वास्तविक कार्यक्रम को analogues। उदाहरणका लागि, इंटेल प्रो, इथरनेट-एडेप्टर PCnet, आईडीई-नियन्त्रक र PIIX3 र ICH6, इन्टेल HD अडियो र ich AC97। यो मिसिन संग, त्यहाँ एक caveat हो - OSE को यो खोसिएर नाङ्गै-डाउन संस्करण, कुनै यूएसबी 2.0 जडान र यसैले उपकरण धेरै गाह्रो छ।
भर्चुअल पीसी - फर्म माइक्रोसफ्ट, आकस्मिक प्रयोगकर्ताहरूको लागि अभिप्रेरित विकास हो। यो भर्चुअल ऑप्टिकल समर्थन छैन, तर यो बेफाइदा यस्तो डेइमन उपकरण वा रक्सी 52% रूपमा तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर को प्रयोग द्वारा क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ। यो मिसिन (जस्तै भर्चुअल वा वास्तविक रूपमा) नेटवर्क संग सञ्चालन गर्न सक्छन्, सजिलै स्थापित र समायोजित छ, यो एउटा सानो आकार र राम्रो स्थानीयकरण छ। र साथै, यो निःशुल्क छ।
समानताहरु डेस्कटप Windows मा चलाउन सक्षम छ, र लिनक्स। यसलाई एप्पल गरेको कम्प्युटर सञ्चालन गर्न डिजाइन गरिएको छ। निस्सन्देह, मैक अन्य यस्तै अनुप्रयोगहरू छन्, तर यो कार्यक्रम भन्दा सुविधाजनक र विश्वसनीय। दुर्भाग्यवश, यो भुक्तानी र बारेमा 2600 rubles लागत र कुनै स्थानीयकरण छ छ। तर यो कर्पोरेट क्षेत्र को लागि एक राम्रो विकल्प हो।
भर्चुअल पीसी QEMU एक खुला स्रोत विकास शिविरमा छ। यसमा लिनक्स आधारित छन् प्रणाली मा काम गर्छ। यसको फाइदा architectures को एक ठूलो संख्या को समर्थन छ, तर Multiplatform साथ ड्राइव र मिसिन को गति कम गर्नुहोस्। त्यसैले, यो भने यसको प्रयोग गर्न अर्थमा बनाउँछ प्रोसेसर वास्तुकला x86 प्रकार लागू गर्दैन।
Hangover - यो के हो? यसको मूल को कथा को अर्थ
यो जोगिन किन आउनुहुनेछ सुनगाभाहरू पात र कसरी?
Andrei Mironov: Filmography र व्यक्तिगत जीवन
कसरी घर मा पनीर बनाउने?